Fanasokajiana kojakoja firavaka - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
Fitaovana ho an'ny trano fanatobiana FBA
Andriamatoa Xie, mpiara-miasa amin'ny YiXing Global Logistics any Guangzhou, dia manampahaizana manokana amin'ny fanaka an-trano ary manana ny magazay ao Amazon. Andriamatoa Xie dia nampiasa ny fantsom-pitaovam-pandraharahana amerikana manokana. Nanomboka tamin'ny fandefasana kaomandy voalohany ka hatrany amin'ny entana maro an-dranomasina fanondranana dia nitombo ny baikon'i Andriamatoa Xie, ary nanjary nahafinaritra kokoa ny fiaraha-miasanay.
Satria YiXing Global Logistics dia tena matihanina amin'ny fitaterana an-dranomasina Sino-US manokana, manana traikefa momba ny logistika sy fitaterana mihoatra ny 10 taona any Etazonia izahay, noho izany manana traikefa manan-karena amin'ny fiasan'ny fitaterana Sino-Etazonia izahay, ary mamela ny mpanjifa ihany koa Matokia ianao. Ho an'ny Amazon FBA, misy ihany koa ny fantsom-pitaterana isan-karazany, indrindra ny vidiny sy ny ora an'ny LCL, ary afaka manao drafitra fitaterana samihafa izahay arakaraka ny filan'ny mpanjifa mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.
Andriamatoa Xie dia nitazona fifandraisana tsara teo amintsika hatrany. Na dia misy aza ny olana madinidinika mandritra ny vanim-potoana dia voavaha haingana daholo. Ny serivisy mahomby sy be fiheverana toy izany dia tena nahafa-po an'i Andriamatoa Xie. Vao tsy ela akory izay, Andriamatoa Xie dia mikasa ny handefa entana hafa any amin'ny FBA any Amazon any Etazonia, izay manodidina ny 20 metatra toradroa. Ny mpitantana Peggy izay nifandray tamin'i Andriamatoa Xie dia nanara-maso ihany koa tamin'ny fotoana ara-potoana ary nanonona ny vidin'ny fandefasana entana betsaka Amazon FBA amin'ny varavarana. Tafiditra ao amin'ny vidiny ny saram-pidiovana ho an'ny fadin-tseranana, ny sarany fahazoan-dàlana ho an'ny fadin-tseranana, ny sarany fandefasana ary ny hetra any amin'ny seranana, tsy misy fanjifana mihintsy.
Natoky ihany koa Andriamatoa Xie fa ny fiaraha-miasa maharitra ataontsika dia manana fahatakarana tsara momba ireo vidin-javatra voafetra ireo, ka novaranay avy hatrany ny drafi-panaterana. Tsy ela aho dia nandamina ny fanangonana isan-trano mba hanaterana ny entana amin'ny trano fitehirizam-bokinay soa aman-tsara, ary azonay natao ny nampiditra sy nandefa ireo entana rehefa tokony ho tonga ny fotoana fandefasana. Mandritra ny vanim-potoana, misy ihany koa ny valiny amin'ny fampahalalana logistics ara-potoana, tsy mila miahiahy, tena mamonjy fotoana sy olana amin'ny mpanjifa!
Raha mila izany ianao, pls mifandraisa amin'ny laharanay: +86 17322126273 (isa mitovy isa).